फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - झ्यामकी झ्याम
त्यसैले, अस्थिरतावाद जिन्दावाद !
नआओस् भनेर प्रार्थना गर्दागर्दै वामहरूको बहुमत आयो । गठबन्धनमा लठबन्धन त पक्कै होला ।
शेरबहादुर देउवाजीको सरकार अस्ति नै ढलिसक्ने थियो तर राष्ट्रियसभासम्बन्धी विधेयकको एकल संक्रमणीय भेन्टिलेटरले यसलाई अझै बचाइरहेको छ ।
वामएकता भताभुङ्ग होस्
केही हप्ता अघिको झटारो
विभिन्न दलहरूको ध्रवीकरण र खासगरी एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन र एकताको कुराले धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ ।
भन्थे, नमरी बाँचे कालले साँचे के–के देख्न पाइन्छ । हो रहेछ । देशमा वामपन्थीहरू यति छिट्टै र यति सजिलै मिल्लान्
ज्यानलाई ठिकै भए पनि मनलाई बेठिक छ । साह्रै रनभुल्लमा परेको छु । देश र प्रदेशको निर्वाचन आयो भन्छन् ।
हाम्रा सरकारी विद्यालयमा नियुक्त अस्थायी शिक्षकहरूले शिक्षा सेवा आयोगले लिने पुरानो शैलीको परीक्षामा कसैगरी उत्तीर्णाङ्क ४० ल्याउन नसक्ने र यो जुनीमा स्थायी हुन नपाउने देखिएपछि हाम्रा उदारमना शिक्षामन्त्री माननीय गोपालमानज्यूको हृदय भक्कानिएर आयो ।
विभिन्न दलहरूको ध्रुवीकरण र खास गरी एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन अनि एकताको कुराले धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ । आउँदो चुनावपछि पनि यो एकता कायमै रह्यो भने यसले नेपाली समाजमा ठूलठूला दुष्प्रभाव पार्नेछ । धेरैको रोजीरोटी गुम्नेछ । धेरैको निद्रा खानेछ, भोक हराउनेछ ।
हाम्रो विद्यालयको नमूना शौचालय उद्घाटन समारोहमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै प्रमुख अतिथिज्यूको अति व्यस्तताले गर्दा निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा ढिलो कार्यक्रम शुरु हुन गएकोमा म क्षमायाचना गर्दछु । अब ढिलो नगरीकन म आशनग्रहणको क्रमलाई अगाडि बढाउँछु । आजको यस गरिमामय सभाको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनुहुन विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु ।
पुरानो सरकारले छिमेकीले जे जे भन्यो, त्यही त्यही नमानेर भताभुंग पारेको नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ सरकार बन्नासाथ फटाफट सुधार आएको छ । भारतको भ्रमण सकेर फर्किएका उपप्र
मानिसहरू भन्छन्, ‘हाम्रो देशमा वर्षैभरि गाईजात्रा हुन्छ ।’ उसो भए कम्तीमा यो साँच्चिकैको गाईजात्रामा हामी राम्रैराम्रा कुरा मात्र गरौँ न त ! प्रगतिका, उन्नतिका, विका
मै उस्तो बूढी !
काठमाण्डू आउने बित्तिकै चिठी लेखौँला भनेर तिमीलाई भल्स्याङ् भुल्सुङ् पारेर आएको थिएँ, छोराबुहारीको घरको रमझममा परेर म पो भुल्सिएँ�
तरकारी आक्रमण जिन्दावाद !
आदरणीय वीर तरकारी व्यापारी साथीहरू क्रान्तिकारी अभिवादन !
हालै राजधानीस्थित बल्खुको तरकारी बजारमा पूर्व सूचना बिना एक्कासी अनुगमन गर्न आउने सरकारी टोेलीमाथि तपाई�
म साह्रै बिग्रिएँछु
माओवादी केन्द्राध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले एक कार्यकर्ता भेलामा ‘म साह्रै बिग्रिएँछु’ भनेको सुन्दा कार्यकर्ताहरू एकछिन त आश्चर्यचकित भएछन् । झुक्किएर उनको मुुखबाट य�
बल्ल सरकार ढल्ने भयो । अब मजा आउने भयो । सरकार बनेकै दिनदेखि आफूले त भनेको हो, यो सरकार ढाल्नुपर्छ । यो मात्रै होइन, जुनसुकै सरकार पनि यसै गरी ढालिरहनु पर्छ । सरकार भनेकै ढा
कार्की काकाको आक्रोश
बजेट प्रस्तुत भएको केही दिनपछि चौबाटोमा अचानक कार्की काकाले मेरो बाटो छेके । कार्की काका कांग्रेसका पुराना नेता । खान्दानी कांग्रेस । परिवारै कडा कांग्रेस । उनी कम्युन
माओवादी केन्द्राध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले एक कार्यकर्ता भेलामा ‘म साह्रै बिग्रिएछु’ भनेको सुन्दा कार्यकर्ता एकछिन त आश्चर्यचकित भएछन् । झुक्किएर उनको मुुखबाट यस्तो
ओली उडाउने अभियान
बस्न पाएँ भन्दैमा थ्याच्च नबस्नू, बोल्न पाएँ भन्दैमा प्याच्च नबोल्नू भन्ने उखान हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नसुनेका होलान् र ! तर, यिनी के भा हुन् ? बस्न त यिनी बस्दै �
आफैँ किन गर्ने ?
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दाइले काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाक नेपाल आफैँले बनाउनु हुँदैन भन्दा धेरैले विरोध गरे । विरोध मात्रै होइन, उनलाई अराष्ट्रिय तत्त्वै घ�
के लेख्नु यस्तो मान्छेका बारे !
यसपालि कुन नेताजीको अभिनन्दन गर्ने होला भनेर विचार गर्दै रहेका बेला अचानक एक जना अनौठो मान्छे फेला पर्यो राजधानीको एक कार्यक्रममा । हेर्दै कच्याककुचुक परेको अनुहार, बट
नछोड् भैरे नछोड्
शेरबहादुर देउवाले अचानक मलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्दा एकछिन त म जिल्ल परेँ । सपना हो कि विपना जस् तो पनि लाग्यो । हौसिएर उत्तिखेरै हुन्छ भनिहाल्न पनि भएन, खबर
आगे ढुंगेलजीको जो विचार
कमरेड ढुंगेलजीले एक अन्तर्वार्तामा खडा गरेको प्रश्न साँच्चै कडा छ । कमरेड प्रचण्ड र बाबुरामहरू प्रधानमन्त्री हुने, सत्तामा बसेर लडीबुडी गर्ने, अघिपछि सुरक्षाकर्मीका �
अर्का काकाको आत्मकथा
‘मध्यरातमा किर्ते चिट्ठी’ । २०७३ मा प्रकाशन हुने एउटा सनसनीपूर्ण किताबको नाम हुनेछ । र, यो पनि आत्मवृत्तान्त नै हुनेछ । एकाएक लेखक बन्न लागेका ती जंगी अधिकारीको यो कृ�
हामी नै हौँ एक नम्बर
हामी बितेको वर्ष २०७२ का उपलब्धिहरूको लेखाजोखा गर्दैछौँ । हामीले गएको वर्ष संसारमा नाम चलाउने धेरै काम गर्न सकेनौँ तैपनि लाजै हुने गरी केही गर्न नसकेको भने होइन । त्यस्�
चुनाव मुर्दावाद !
हामी विभिन्न साना राजनीतिक दलका डुहुरे कर्मचारी संगठनहरूले सिंहदरबारभित्र गरेको धर्ना, तालाबन्दी र नाराबाजीका सम्बन्धमा केही सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति ह